Sidee loo Kordhiyaa Ka Qeybgalka Dhageystayaasha iyo Helitaanka Jawaab celin | Martech Zone
Sida loo Kordhiyo Ka Qeybgalka Dhageystayaasha iyo Helitaanka Jawaab celin
Arbacada, Juun 5, 2013 Jayson DeMers
Abuuritaanka xanta ganacsiga iyo helitaanka bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ah ee alaabadaada ama adeegyadaada waa tillaabada ugu horeysa ee lagu dhisayo bulsho daacad ah. Waqtiga-gaaban, tani waxay u horseedi kartaa kororka taraafikada iyo iibka. Waqtiga fog, tani waxay dhisi kartaa guuto danjirayaal magac leh oo u shaqeeya sida koox ka ganacsada dhuumaaleysiga. Maaddaama ku guuleysiga quluubta dadkaaga ay si weyn ugu tiirsan tahay ka-qayb-galayaasha dhagaystayaasha, waxaa muhiim ah in si wax ku ool ah looga faa'iideysto ku dhaqanka jawaabna ka helaan. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawin doona inaad burburiso oo aad ganacsigaaga ku horumariso.
Mararka qaarkood, dadka oo dhan waxay u baahan yihiin xoogaa sasabasho iyo sasabasho qarsoon si ay u dhiirigeliyaan. Sidaa awgeed, fahamka awooda wicitaanada ficilka iyo ku dhaqan galintooda waxay dhaqso u wanaajin kartaa ka qeyb qaadashada dhagaystayaasha. Markaad abuureyso nuxurka suuqgeynta, waxaa muhiim ah inaad ka faa'iideysato shaqadaada adag adoo ku daraya nooc ka mid ah wicitaanka ficilka si aad dhagaystayaashaada u qaaddo tallaabada xigta Tani waxay ka jawaabi kartaa su'aal dhammaadka boostada blog si ay u dhaliso dood ama u hesho martida inay u saxiixaan email warsid sidaa darteed waxaad sameysan kartaa xiriirro dhow.
Markaad isticmaaleyso wicitaanka ficilka, waa muhiim inaad dhigto goobta saxda ah oo aad raacdo horumarka macquul ah. Xaaladaha badankood, tan waxaa lagu meeleyn doonaa dhamaadka mawduuca ka dib markaad bixiso qiime iyo / ama aad ka jawaabto su'aal. Ka dib markaad cadeysay inaad tahay qof aqoon leh oo lagu kalsoonaan karo, dhagaystayaashaadu waa inay dareemaan inay aad ugu raaxaystaan ​​kaqaybqaadashada. Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu daro wicitaanka ficilka iyo in dadku ku dhexgalaan heer uun.
Noqo Qof Ahaan
In kasta oo adduunyada iyo dhaqammada ganacsigu ay noqdeen kuwo otomaatig ah oo aan shaqsiyadeysnayn muddooyinkii ugu dambeeyay, haddana dadka badankood wali waxay u ooman yihiin taabashada aadanaha. Si kasta oo aan u horumarsanno tikniyoolajiyadda, ganacsiga wanaagsan wuxuu inta badan ku saleysan yahay cilaaqaadka iyo abuurista xiriir lala yeesho macaamiisha. Taasi waa sababta u oggolaanaysa shakhsiyaddaada inay ka dhex dhalaasho waxyaabaha aad ka kooban tahay iyo inaad shaqsiyan noqotid kuwo faa'iido badan leh. Halkii aad ku gabban laheyd hooska, waxaa ugufiican inaad noqoto mid hufan oo u ogolow inay kugu bartaan adiga heer shaqsiyeed ka badan. Tan waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan:
Isticmaalidda cod saaxiibtinimo marka la abuurayo nuxurka
Ka fogow jargon aad u adag oo dhageystayaashaada aysan fahmi karin
Iskuday inaadan la imaanin inay tahay wax iska yeelyeel ah
Si deg deg ah uga jawaab celinta faallooyinka iyo weydiimaha
Horumarinta qaab gaar ah oo kaaga duwan tartamayaasha
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto sawirro yar oo adiga iyo xubnaha kooxda ah oo ka qayb qaadanaya hawlaha ka baxsan ganacsiga. Adoo u oggolaanaya dhagaystayaashaada inay kugu bartaan heer shaqsiyeed aad u badan, dhismaha xiriirku waa inuu noqdaa mid aad u fudud hawlgalkuna waa inuu si dabiici ah u kordhaa.
Noqo Meel Kasta
Iyadoo boqolkiiba 56 dadka adduunka ku nool iyagoo adeegsanaya nooc ka mid ah warbaahinta bulshada, waligeed ma fududaan in la helo. Adoo ka dhigaya mid ku habboon dadkaaga si aad u hesho meheraddaada oo aad u cusbooneysiiso, waxaad ku sii wadi kartaa inay kula macaamilaan si joogto ah. Tan waxaa badanaa lagu fulin karaa iyadoo la socodsiinayo qof caqli badan ololaha suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo adeegsiga goobo kala duwan. Ka mid ahaanshaha dhowr goobood waa muhiim maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad gaarto boqolkiiba ugu badan ee dhagaystayaashaada. Tani waxay sidoo kale aasaaseysaa shabakad loogu talagalay dhammaan joogitaanka khadka tooska ah ee internetka oo waxtar u leh sumeynta. Haddii kale, ku dhejinta kaliya hal ama laba shabakadood ayaa yareyn kara saameyntaada iyo kaqeybgalkaaga.
Markii aad bilaabeysay, ganacsiyada badankood waxay ku bilaabaan xulashooyinka ugu macquulsan waxayna abuuraan qoraallo ku saabsan Facebook iyo Twitter. Haddii aad raadineysid inaad xiriir la sameysid xirfadlayaal kale oo ganacsi, LinkedIn iyo Google+ ayaa faa'iido leh. Suuq geynta sawirka, Pinterest, Instagram iyo Tumblr ayaa ah xulasho wanaagsan. Youtube ayaa ku habboon isugeynta fiidiyowyada. Waxa kale oo jira goobo lagu calaamadiyo bulshada sida Reddit, Stumbleupon iyo Digg oo xitaa hal talaabo sii qaadi kara.
Dhegeystayaashaada Kusoo Bixi Waxqabadka
Dadku waxay leeyihiin rabitaan dabiici ah oo lagu daro, sidaa darteed ku kasbashada rabitaankan ayaa faa'iido yeelan kara. Tusaale ahaan, ku dhiirrigelinta akhristayaasha inay sharraxaad ka bixiyaan qoraalka barta oo ay bilaabaan wadahadal waxay dejin karaan heer ka-qaybgal. Markaad sidaas sameyso waxay hal shimbir ku dishaa laba shimbirood maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad la macaamisho akhristayaasha iyo akhristayaashaada inaad midba midka kale la fal gasho Isla mar ahaantaana, waa wadada ugu fiican ee lagu helo jawaab celin qiimo leh.
Ganacsi ku saleysan badeecad, waxaad weydiin kartaa macaamiisha inay u diraan sawirradooda iyaga oo isticmaalaya alaabta oo ay ku dhejinayaan boggaaga ama astaamaha warbaahinta bulshada. Fikrad kale ayaa ah in la qabto tartamo halka guuleystaha uu ku helo abaalmarin lacageed, kuuboon ama wax soo saar bilaash ah. Milkiilaha makhaayada ayaa weydiisan kara kuwa raacsan Facebook inay siiyaan fikrado nooc cusub oo macmacaan ah. Qofkasta oo bixiyay fikradda la doortay wuxuu ku guuleysan lahaa abaalmarin bilaash ah.
Ahmiyada jawaab celinta
Si looga hortago wareegga xun ee khaladaadka oo aad meheraddaada u dhigto waddada guusha, waxaa muhiim ah inaad si joogto ah uga hesho jawaab-celin aan u eexanayn dhagaystayaashaada. In kasta oo aysan had iyo jeer ahayn wax lagu farxo in la maqlo faallooyin diidmo ah, dhaliil wax ku ool ah ayaa kuu sheegi karta waxa hagaajinta u baahan in la sameeyo. Dhinaca kale, faallooyinka togan ayaa ku tusi doona waxaad si sax ah u qabanayso si aad u biyo raaci karto una soo celiso. Halkan waxaa ku yaal fikrado aad ku heli karto jawaab celin.
Sanduuqa Jawaabta ama Foomka
Tani waa xulashada ugu toosan uguna habboon ee lagu ogaan karo meelaha dhibaatada ka jirto. Isticmaalayaasha WordPress, waxaa jira waxyaabo badan oo la heli karo oo si dhakhso leh u rakibi doona sanduuqa jawaab celinta ama foomka. Caadi ahaan, waa in lagu dhejiyaa dhinaca dhinaceeda widget ama bog shaqsi hoosta cinwaanka websaydhka. Qaarkood waxay kaliya u oggolaadaan faallooyinka fudud, kuwa kalena waa kuwo aad u adag oo u oggolaada dhagaystayaashaada inay qiimeeyaan shuruudaha gaarka ah ee ganacsigaaga.
Sahamintu waa hab fiican oo lagu go'aamiyo qanacsanaanta guud ee dhagaystayaashaada iyo saldhigga macaamiisha. Waxay sidoo kale yihiin mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu ogaan karo qaababka togan iyo kuwa taban. Adoo adeegsanaya barxad sida Dareemo daraasad, waxaad abuuri kartaa sahanno u gaar ah ganacsigaaga. Kadib sameynta sahan, ra'yi uruurin ama su'aalo-weydiin, waxaa loo diri karaa dhagaystayaashaada iyadoo loo soo dirayo emayl, Twitter, xiriiro macaamiil, iwm. fudud oo aan ka badnayn 10 su'aalood. In kastoo, sida laga soo xigtay KISSmetrics, sahanka ugufiican waxaa kujira shan su'aalood oo kaliya. Sidaa awgeed, waa caqli in la weydiiyo oo keliya su'aalaha muhiimka ah ee dadku si dhakhso leh u buuxin karaan.
Ugu dambeyntiina, adeegsiga aalad casri ah oo loogu talagalay falanqaynta habdhaqanka dhagaystayaasha ayaa ku siin kara aqoon qiimo leh. Nidaamka xulashada ganacsiyada badani waa Google Analytics maxaa yeelay waa bilaash, fududahay in la isticmaalo oo aad u dhameystiran.
Waxay soo bandhigeysaa xog farabadan oo ay kujiraan luuqada isticmaalaha iyo goobta, ilaha taraafikada, intee in le'eg ayay isticmaalayaashu ku sii jiraan bartaada iyo aaladaha ay dhagaystayaashaadu u adeegsadaan inay ku helaan macluumaadka. Waxay sidoo kale leedahay bog-bog Analytics taasi waxay muujineysaa qeybaha degelku helayo qasabadaha ugu badan.
Sirdoonka ganacsiga iyo keydinta xogta waa laba qaybood oo aad muhiim u sii noqonaya, sidoo kale. Aruurinta iyo falanqaynta xogta warcelinta macaamiisha (iyo sidoo kale akhlaaqda isticmaaleyaasha, xog gujinta, iyo inbadan oo badan) ayaa lagama maarmaan u ah aqoonsiga dhibaatooyinka iyo fursadaha, ka dibna ka faa'iideysanaya.
Marka la eego SEO, Google Analytics waxay bixisaa liistada ereyada muhiimka ah ee isticmaaleyaashu galeen si ay u helaan waxyaabahaaga. Barxadani waxay kaloo jajabisaa qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha hoos ku qoran si aad u ogaato qoraalada ay helayaan aragtida ugu badan. Isku soo wada duub dhammaan xogtan, waxaad ka heli kartaa jawaab celin la taaban karo oo kaa caawin karta abuurista waxyaabaha mustaqbalka iyo suuqgeynta.
Tags: horumarinta dhagaystayaashaMedia Social Suuq
Jayson DeMers waa aasaasaha & agaasimaha guud Iimaylka Falanqaynta, qalab qalab wax soo saar oo ku xira koontadaada Gmail ama G Suite isla markaana muujiya howlaha emaylkaaga - ama kan shaqaalahaaga. Raac isaga Twitter or LinkedIn.
Tilmaanta 5 Daqiiqo Si Aad Shaqo Uga Heshid Baraha Bulshada
Jun 6, 2013 saacadu markay ahayd 7:58 AM
adoo adeegsanaya madal casri ah oo lagu falanqeeyo akhlaaqda dhagaystayaasha ayaa ku siin kara aqoon qiimo leh.